FAAIIDADA AY LEEDAHAY AQOONTO HABA YARAATEE IYO INAADAN DHAAFAYN WIXI ALLE KUU QADERO | Wacyigelin's Blog
Posted on Abriil 16, 2010 by wacyigelin
Waa dhacdo run ah balse waxaan ku dari doonaa erayo yar si aan u wanaagjiyo sheekada; ninka laga wariyayna wuxuu u sheegay sidan:
Waxaan doonayey inaan barto dhakhtarnimo laakiin markaan dhigtay sanad kadib waxaan ku qasbanaaday inaan ka tago waxbarashadi si aan u raadsado nolol maalmeedkayga. Waxaan ku fikirsanaa markaas inaan hal sano ka maqnaado iskuulka balse sanadba sanad ayuu u dhiibay. Ugu danbaysti waxaan degay Alaska meeshaasoo aan kalkaaliye ka ahaa meel dahabka laga qodo.
Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhacay duufaan daran. Waxaan ku soo caariyay doon shiraac leh ee ay duufaantu burburisay aqalaka aan deganaa hoostiisa. Waxaa soo istaagay gurigayga hortiisa laba nin oo daal iyo rafaad daran ka muuqdo kuwaasoo I waydiistay inaan siiyo meel ay seexdaan. Waxaan u diyaariayay raashin ay cunaan. Waxaan gogol u dhigay meeshi ugu haboonayd aqalka amaba meesha kaliya ee la seexan karo. Markaan fariisanay waxaan ogaaday in midkood waxa ka dhigo Harvard, kan kalena uu ka yahay macalim falsafadeed jaamacadda Yale. Waxayna ii sheegeen inay ku jireen fasax oo ay doontooda dhex deganaayeen.
Maalinki labaad ayaan ku soo wareejiyay meeshi dahabka laga qodayey dabadeedna ku soo noqonay aqlakii oo bilownay inaan sigaar cabno sheekana sheeko ugu dhiibno ilaa xiligi cashada laga gaaray. Si lama filaan ah ayaa iridda lagu soo garaacay; marki aan furay waxaa taagan nin wejigiisa dhiig daboolay oo uu dhiigiisu hooray ilaa dhulka. Wuxuu ii sheega inay laba xabo oo maar ah ay qaraxday dabadeedna indhiisa ku firirtay uuna ka maqlay dadka inuu nin dhakhtar ah joogo meeshan. Markaasuu wuxuu soo socday isagaoo ku simbirixanaya barafka dabadeedna garguuranaya ilaa uu soo jaro labo iyo toban mayl ilaa uu ka soo gaaro aqalkayga. Waxaan ku qasbanaa inaan u sheego inaanan dhakhtar ahayn markaasuu wejiga qabsady quusasho darteed. Waxaan soo xasuustay boorsadayda inay daawo ku jirto iyo weliba caleemo kokayn taas oo hadaan biyo ku qaso oo aan siiyo yaraynaysa xanuunkiiisa. Markaas ayaan waxaan soo qaatay aalad qaban karta shey aad u yar oo aan dab geliyay si aan uga takhaluso wixi dulin ah ee ay xambaarsanatahay. Waxaan si tartiib ah uga soo saaray indhihiisa burburki maarta. Markaas ayaan faashad saaray. Wuxuu ila joogay muddo saddex maalmood ah dabadeedana ka furay faashaddi asagoo I soo eegay kuna sigtay inuu ooyo lehna, “Waxaad ii soo celisay aragaygii,dhaktar.”
Maalinki labaad ayaa sadexdi nin ee martida ii ahayd iga wada tegayeen; marki labadi nin ee marki hore ii timid ay dhameeyeen inay rartaan doonidooda una diyaar garoobaan safar dheer ayaan arkay iyadoo wada hadlaya. Mid ayaa dabadeed igu soo noqday.
Wxuu yiri: Saaxiibow waxaan kaa sheegaynay wax aadan jeclaysanin, Maxaa ku helay? Miyaanay awoodaadu kuu ogolaanayn inaad wax kale qabato mise waxaad rabtaa inaad noloshaada inta ka hartay ku dhamaysato dhagax jebin? Mise waxaad ka mid tahay kuwa khasaaray ee quustay ee aanan waxba u aabeyeelaynin?
Eraygaas uu yiri ayaa aad ii taabtay. Waa u qayliyay oo ku iri isuga. Waqti yar kadibna waxaan hoygaygi ka qaatay wixi aan qaadan karey oo raacay labadi nin. Dabadeed waxaan tegay jaamacaddi oo aan sidaas ku dhamaystay anigoo weliba buundo fiican uga baxay.
Ilaahay wuxuu kuu qadaro waa sidaas. Ninkan ilaahay wuxuu u soo diray sadexdan nin si ay uga kiciyaan hurdad.
Sheekadan waxaa laga weriyay Pofessor, dhakhtar Fredrick Louis kaas oo noqda mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhakhaatiirta waddanka Maraykanka.
Haddaba Aqristow maxaan ka faaiidaynaa aqriska sheekadan?
In dad badan oo leh caqli iyo awood ay wax wayn ugu tari karaan bulshadooda aanay isticmaalayn oo caajis yihiin.
In Qadartu ay tahay wax aan la dhaafi Karin basle eebe dadaalka na faryo.
Gargaar ka dhibaataysan laga yaabee inuu ku siiyo talo fiican oo ku anfacda.
Weligaa raxmadda eebe ha ka quusan oo wanaag rejeey mar walba.
Qiimaha wax barashada haba yaraatee. Ninkan wuxuu badbaadiyay ninki indhaha ka dhici lahaa asagoo isticmaalay aqoonta uu helay halki sano ee uu wax bartay.
Ugu danbaystii, aan u wada dareerno waxbarashada anagoon u kala harin yar iyo wayn, lab iyo dehdig, cabqari iyo mid caqli dhexe lehba.
« Yaabka yaabkiisu waa markuu qalbigaadu ku xabiso SHEEKADII AAN LA SOO MARAY ISLAAMKA WAYN!!! »